Iindlela ezi-5 eziPhezulu kuLawulo lweeAsethi zeDijithali (i-DAM) ezenzeka ngo-2021 | Martech Zone
Ukuhamba uye kwi-2021, kukho inkqubela phambili eyenzekayo kwi Management Asset Digital (DAM) ishishini.
Kwi-2020 sabona utshintsho olukhulu kwimikhwa yokusebenza kunye nokuziphatha kwabathengi ngenxa ye-covid-19. NgokukaDeloitte, inani labantu abasebenza emakhaya liphindwe kabini eSwitzerland ngexesha lobhubhane. Kukho nesizathu sokukholelwa ukuba ingxaki iya kubangela ukwanda ngokusisigxina emsebenzini okude kumhlaba wonke. UMcKinsey ukwabika abathengi ukuba batyhalele ukwanda kweenkonzo zedijithali okanye iinkqubo zokuthenga, ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu kwi-2020 kunangaphambili, ezichaphazela zombini iinkampani ze-B2B kunye ne-B2C.
Ngenxa yezi zizathu nangaphezulu, siqala ngo-2021 ngendlela eyahluke mpela kunokuba besingalindela kunyaka ophelileyo. Nangona ukwenziwa kwedijithali bekuyinto eqhubekayo kwiminyaka eliqela ngoku, kukho izizathu zokulindela ukuba isidingo sayo siyakonyuka kunyaka olandelayo. Kwaye baninzi abantu abasebenza kude-kwaye iimveliso kunye neenkonzo zithengwa kwaye ziqhutywa kwi-intanethi ukuya kwinqanaba elonyukayo-silindele ukubona ukukhula okubonakalayo kwinani leeasethi zedijithali kunye nemfuno yokuxhasa isoftware. Ke ngoko, akuthandabuzeki ukuba Isoftware yolawulo lwempahla yedijithali iya kuba liqonga lomsebenzi elibalulekileyo kumashishini amaninzi nakwimibutho kunyaka olandelayo.
Kweli nqaku, siza kujonga kufutshane noko kugcinelwe u-2021 kumaqonga oLawulo lweeAsethi zedijithali kwaye siza kudwelisa iindlela ezi-5 eziphambili esikholelwa ukuba ziya kuba zezona zibalulekileyo kulo nyaka.
Umkhwa woku-1: Ukuhamba kunye noLawulo lweeAsethi zeDijithali
Ukuba u-2020 usifundise into enye, ibikukubaluleka kwemikhwa yokusebenza eguqukayo. Ukukwazi ukusebenza ukude kwaye usebenzisa izixhobo ezahlukeneyo, kumkile ekubeni lilungelo kuye kwaba yimfuneko yamashishini amaninzi kunye nemibutho.
Ngelixa amaqonga e-DAM ebencedisa abantu kunye nemibutho ukuba basebenze kude ukude, kusengqiqweni ukukholelwa ukuba ababoneleli besoftware baya kuqhuba umsebenzi onamandla ukuya kwinqanaba elikhulu. Oku kubandakanya ukuphucula ukusebenza kwe-DAM, njengokusebenzisa izixhobo zefowuni kusetyenziswa ii -apps okanye ukwenza lula ukugcinwa kwelifu ngeSoftware njengeNkonzo (SaaS) yesivumelwano.
KwiFotoWare, sele siqalisile ukulungiselela abathengi abafuna ukuhamba kakhulu. Ukongeza ekwandiseni ukugxila kwethu kwi-SaaS, sikwasungule i-app entsha yeselfowuni ngo-Agasti ka-2020, esenza amaqela afikelele kwaye asebenzise i-DAM yawo ekuhambeni kwizixhobo zabo eziphathwayo.
Umkhwa wesi-2: uLawulo lwaMalungelo kunye neFomu yeMvume
Okoko imigaqo ye-EU ye-GDPR iqale ukusebenza kwi-2018, kuye kwakho isidingo esandayo samashishini kunye nemibutho yokugcina umkhondo womxholo kunye nokuvunywa kwabo. Okwangoku, umntu unokufumana imibutho eliqela isokola ukufumana iindlela zokuthobela le migaqo ngokufanelekileyo.
Kunyaka ophelileyo sincede abasebenzisi abaninzi be-DAM ukumisela ukuhamba komsebenzi ukusombulula imiba efanelekileyo kwi-GDPR, kwaye oku kufanele ukuba kugxilwe ngokuqaqambileyo ngo-2021 ngokunjalo. Ngemibutho emininzi ebeka phambili ulawulo lwamalungelo kunye ne-GDPR, sikholelwa ukuba iifom zemvume zinendawo ephezulu kuludwe lweminqweno yabathathi-nxaxheba abaninzi.
I-30% yabasebenzisi be-DAM baqwalasele ukulawulwa kwamalungelo emifanekiso njengenye yeenzuzo eziphambili.
Ngokumiliselwa kweefom zemvume yedijithali, oku kuya kuba kukusebenza kwamandla amakhulu, kungekuphela nje ngokulawula i-GDPR, kodwa kwiindidi zamalungelo emifanekiso.
Umkhwa wesi-3: Ukudityaniswa koLawulo lweeasethi zeDijithali
Umsebenzi ophambili we-DAM ukonga ixesha kunye nomzamo. Umdibaniso ke ngoko ubalulekile kwimpumelelo ye-DAM, kuba yenza ukuba abasebenzi bakwazi ukufumana iimpahla ngokuthe ngqo kwiqonga xa besebenza kwezinye iinkqubo, uninzi lwenza lukhulu.
Iimpawu eziphezulu zokwenza imveliso zisuka kwisisombululo somthengisi omnye, zibeka phambili ababoneleli besoftware abazimeleyo endaweni yoko.
Ngokuqinisekileyo zininzi izibonelelo zokukhetha nokukhetha isoftware endaweni yokubophelela kumthengisi omnye okanye ababini. Nangona kunjalo, ukudityaniswa okufanelekileyo kufuneka kubekhona ukuze iinkampani zifumane okuninzi kwisoftware yazo ezimeleyo. Ii-API kunye neeplagi ke ngoko zibalulekile kutyalo-mali kuye nawuphina umboneleli wesoftware ofuna ukuhlala efanelekileyo kwaye uya kuqhubeka nokubaluleka ukuya kuthi ga ngo-2021.
KwiFotoWare, siyaqaphela yethu iiplagi zeAdobe yokuQamba kwamafu kunye neMicrosoft Office Ukuthandwa kakhulu phakathi kwabathengisi, kunye nokudityaniswa kwenkqubo ye-PIM yombutho okanye i-CMS. Kungenxa yokuba uninzi lwabathengisi kuya kufuneka basebenzise iiasethi ezahlukeneyo kuninzi lweenkqubo ezahlukeneyo kunye nesoftware. Ngokudityaniswa kwendawo, sinokuphelisa isidingo sokukhuphela rhoqo kunye nokulayisha iifayile.
Umkhwa 4: Ubukrelekrele bokwenza izinto (AI) kunye noLawulo lweeAsethi zeDijithali
Omnye wemisebenzi echitha ixesha xa usebenza ne-DAM inento yokwenza nokongeza imethadatha. Ngokufezekisa ii-AI-kunye nokubenza bakwazi ukuthatha lo msebenzi-iindleko ezinxulumene nexesha zinokuncitshiswa nangakumbi. Ukuza kuthi ga ngoku, bambalwa kakhulu abasebenzisi be-DAM abasebenzisa le teknoloji.
Ngokutsho Uphando lweFotoWare ukusuka ngo-2020:
Kuphela yi-6% yabasebenzisi be-DAM ebesele betyale imali kwi-AI. Nangona kunjalo, i-100% iceba ukuyiphumeza kwikamva, eya kuthi ikhokelele ekwandiseni ixabiso le-DAM yabo.
I-75% ayinalo ixesha elikhethiweyo lokuqalisa koku kuphunyezwa, iphakamisa ukuba banokulinda ukuba iteknoloji iqhubeke ukuphucula, okanye bangangazi ngamathuba okwangoku kwimarike.
Ukudityaniswa komthengisi weqela lesithathu kunye nomboneleli we-AI, Umfanekiso, sele ikhona kwiFotoWare, kwaye siyakholelwa ukuba ukudityaniswa kolu hlobo kuya kukonyusa ukuthandwa. Ngokukodwa kuba ii-AI zihlala ziphucula kwaye ziya kuhlala zikwazi ukuqonda izifundo ezininzi njengoko ixesha lihamba, kwaye ukwenza oku ngokweenkcukacha ezithe kratya.
Ukuza kuthi ga ngoku, banokuqonda kwaye bathathe imifanekiso ngemibala echanekileyo, kodwa abaphuhlisi basasebenza ekwenzeni ukuba babubone ubugcisa, obuya kuba yinto efanelekileyo kwiimyuziyam nakwiigalari. Banokububona ubuso kakuhle kweli nqanaba, kodwa ezinye izinto zisasebenza, umzekelo xa kusetyenziswa iifaskask, kwaye kubonakala kuphela iindawo zobuso.
Umkhwa wesi-5: iTekhnoloji yeBlockchain kunye noLawulo lweeAsethi zeDijithali
Umkhwa wethu wesihlanu we-2021 yitekhnoloji ye-blockchain. Oku akubangelwa kukunyuka kweebitcoins, apho kufanelekileyo ukuze kulandelwe uphuhliso kunye nokuthengiselana, kodwa ngenxa yokuba sikholelwa ukuba itekhnoloji inokubonakala ngakumbi kwezinye iindawo kungekudala, i-DAM yenye yazo.
Ngokuphumeza i-blockchain kwiqonga le-DAM, abasebenzisi banokufumana ulawulo olukhulu ngakumbi lweeasethi zabo, belanda lonke utshintsho olwenziwe kwifayile. Kwinqanaba elikhulu, oku kungathi-ekuhambeni kwexesha-kuvumele abantu ukuba, umzekelo, bafumane ukuba ingaba umfanekiso uphazanyisiwe na okanye ukuba ingaba ulwazi olungisiweyo lutshintshiwe.
Ufuna ukufunda ngakumbi?
Ulawulo lweeasethi zedijithali ziyaqhubeka ngokuqhubekayo, kwaye kwiFotoWare senza konke okusemandleni ethu ukuze sihambisane nentsingiselo. Ukuba ungathanda ukufunda okungakumbi malunga nathi kunye nento esinokukunika yona, ungabhukisha intlanganiso yokungazibopheleli kunye nenye yeengcali zethu:
Bhuka iNtlanganiso kunye neeNgcali ze-DAM zeFotoware
tags: ilifu lokudala le-adobeaikukubhadla okungeyonyaniblockchainIteknoloji ye-blockchainiifom zemvumeidamaukudityaniswa kwedamaIsoftware yedamaIindlela zamadamadeloitteUlawulo lwee-asethi zedijithaliukuhlanganiswa kolawulo lwee-asethi zedijithaliIsoftware yolawulo lwee-asethi yedijithaliiindlela zolawulo lwee-asethi zedijithaliifotowaregdpringcingaMcKinseyMicrosoft Officeipimukulawulwa kwamalungeloiindlela zetekhnolojiiintsingiselo